Shariif oo Axdiga ka saaray qodobo
17 Jun 17, 2012 - 6:03:04 AM
Madaxweynaha Somalia Sh. Shariif Sh. Axmed ayaa maanta 17 June,2012 soo saaray qoraal uu Axdiga KMG ah kaga saaray dhowr qodob oo uu sheegay inay ka horimaanayaan heshiiska Roadmap iyo heshiisyadii Garowe 1, Garowe 2, Gaalkacyo iyo Addis Ababa.
Sh. Shariif ayaa wareegtada uu soo saaray wuxuu ku baabi'iyay qodobada 11, 28, 33 iyo qodobka 34-aad, isagoo sheegay in qodobadan uu uga saaray Axdiga KMG si loo fuliyo heshiiskii Roadmap-ka iyo kuwii ka dambeeyay.
"Markii aan arkay inaysan qabsoomi karin kulamadii baarlamaanka iyo in dalku uu ku jiro xaalad adag ayaan go'aansaday in qodobadaan aan laalo" ayuu yiri Sh. Shariif oo sheegay inuu diidmada qodobadan u cuskanayo qodobo sharci ah.
Qodobada uu Madaxweynuhu diiday ayaa waxay quseeyaan Howlaha Baarlamaanka iyo sidoo kale Ansixinta Dastuurka cusub, iyadoo Sh. Shariif uu sheegay in dastuurka ay Ansixin doonaan Ergooyinka ay soo xulayaan odayaaha dhaqanka.
Dhanka kale, Madaxweynaha Somalia Sh. Shariif ayaa wuxuu soo saaray wareegto kale oo uu ku dalbanayo in hantidii ay lahaayeen Marxuumiinta kala ah; Gen. Salaad Gabeyre Kadiye, Jen. Maxamed Caynaanshe Guuleed iyo Col. C/qaadir Dheel Cabdulle loo celiyo caruurtooda oo dhaxalka leh.
Madaxweynaha ayaa sheegay in amarkan uu dhaqangalayo maanta, isagoo xusay in la celiyo dhamaan hantida ay marxuumiintan lahaayeen oo ku taala gudaha iyo daafaha magaalada Muqdisho.
Dowladii hore ee Somalia ayaa waxay la wareegtay hantidii ma guurtada ahayd ee ay xubnahan lahaayeen, kadib markii lagu helay isku-day afgami, iyadoo lagu xukumay xiligaas dil toogasho oo lagu fuliyay sanadkii 1972-kii.
Madaxweynaha Puntland oo u safray dalka Ethiopia